Showing 141-160 of 361 items.
अब ट्विटरमा राजनीतिक प्रचार गर्न नपाइने
बीबीसी / सामाजिक सञ्जाल ट्विटरले राजनीतिक प्रचारलाई प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। राजनीतिक सम्मान किन्नेभन्दा कमाउनुपर्ने विषय भएको भन्दै ट्विटरले आउँदो नोभेम्बर २२ देखि राजनीतिक प्रचारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। ट्वि�
एजेन्सी / मकै नेपालमा सर्वसुलभ उपलव्ध हुने अन्न हो। जो सडक किनारादेखि पाँचतारे होटलका मेनुमा समेत पाइन्छ। मकैलाई भुटेर, पोलेर, उसिनेर र भातको रुपमासमेत खान सकिन्छ। त्यतिमात्रै होइन, मकैबाट अन्य विभिन्न परिकार पनि बन्ने गरेका �
पूर्वी खबर पाँचौबर्ष प्रवेश
इटहरी/ एटिएन मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित पूर्वी खबर डटकम आईतबार पाँचौ बर्षमा प्रवेश गरेको छ। पूर्वी खबरले आईतबार इटहरीस्थित मुख्य कार्यालयमा बिशेष कार्यक्रम गरेर चौथो बार्षिकोत्सव मनाएको हो। आईतबार भएको बार्षिकोत्सव का
काठमाण्डाै&nbsp; / रौतहट बमकाण्ड लुकाउन र मुख्य दोषीलाई बचाउन त्यतिबेला राज्य नै लागेको खुलासा भएको छ। न्यायका लागि १२ वर्षयता कानुनी लडाईं लड्दै आएका मृतक ओसी अख्तरका ससुरा समसुल मियाँले राज्यको सबै निकायलाई घटना लुकाउन र दोषील�
ठाउँ अनुसार भाइटीकाको साइत, कुन ठाउँमा कति बजे ?
काठमाण्डौ / अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले भाइ टीकाको साइतको समय ठाउँअनुसार फरक फरक तोकेको छ। यसअघि दसैंको साइतसमेत सो समितिले यसैगरी तोकेको थियो। सो समितिको बैठकपछि सभापति प्रा.डा. माधव भट्टराई र सदस्य सचिव आचार्य �
सेल्फीका कारण सयौंले ज्यान गुमाउँदै
काठमाण्डौ / सेल्फी फेशन जस्तै भएको छ। यो जति रोमाञ्चक र लाभदायक छ उति नै खतरनाक पनि छ।सेल्फीका कारण सयौंले ज्यान गुमाइसकेका छन्। आइआइटी कानपुरको तथ्यांक अनुसार सन् २०११ इता सेल्फीका कारण ज्यान गमाउने मध्ये आधा भारतका छन्। त्य�
प्रकाशित मितिः कार्तिक ४, २०७६
काठमाण्डौ / नेवार समुदायले मनाउँदै आएको स्वन्ति नखः(तिहार पर्व) मा लक्ष्मी पूजा किजा पूजा र नेपाल सम्वत् ११४० कुन&ndash;कुन दिनमा मनाउने भन्ने विषयमा मतभिन्नता देखिएको भन्दै विभिन्न सरोकारवाला संस्थताले संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित
इटहरी / तपाईलाई लाग्न सक्छ आफ्नी श्रीमती र प्रेमिकाले आफुलाई सबै कुरा बताउछिन्। तर तपाईंलाई उनीहरुले सबै कुरा बताइरहेका हुदैन्न। सबै पुरुषले महिलालाई बुझ्न नसक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। उनीहरुले एकदमै गोप्य राख्ने केहि कुरा
लभ म्यारिज गर्ने सपना भए पनि प्रेमी पाउन गाह्रो भयो : इन्दिरा जोशी
इटहरी / १२ वर्षअघि नेपाल टेलिभिजनमा &lsquo;को भन्दा को कम&rsquo; शीर्षकको गायन प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। सो कार्यक्रममा नवलपरासीबाट भाग लिन आएकी सामान्य काली केटीले प्रथम स्थान हासिल गरेकी थिइन्, जसको खासै चर्चा भने भएन। त्यसको केही वर्ष
नासाले उब्जायो मंगल र चन्द्रमा बालिनाली
काठमाण्डौ / नासाका वैज्ञानिकहरूले कृतिम रुपमा मंगल र चन्द्र ग्रहमा वातावरण र माटो तयार गरेर बालिनाली उब्जाएका छन्। उनीहरूका अनुसार भविश्यमा मंगल र चन्द्र ग्रहमा मानव बस्ति बसाइयो भने त्यहाँ उनीहरूका लागि खाद्य पदार्थ उब्जाउ�
काठमाण्डौ / सरकारले आगामी १ कात्तिकदेखि देशैभरका सामुदायिक विद्यालयमा नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने
शनी बन्यो धेरै चन्द्रमा भएको ग्रह
काठमाण्डौ / सौर्यमण्डलको दोश्रो ठूलो ग्रहको रुपमा रहेको शनी ग्रहको बाहिरी घेराहरु यति विशाल छन् कि पृथ्वीबाट टेलिस्कोपले हेर्दा समेत प्रष्टै देखिन्छन्। तर पृथ्वीबाट शनी ग्रहका उपग्रहहरु भने सजिलोसँग देखिँदैनन्। शनि ग्रहका
एजेन्सी / भनिन्छ सम्बन्ध जोड्नुभन्दा त्यसलाई टिकाइराख्न निकै मुश्किल हुन्छ। पछिल्लो समय सम्बन्धलाई टिकाइराख्न पनि निकै कठिन हुँदै गएको छ। धेरै सम्बन्धहरु व्यस्त जीवनशैलीका कारण पनि टुट्ने गरेका छन्। अक्सर व्यस्तताका कारण �
अल्छे मानिसको आयु लामो !
काठमाण्डौ / एक अनुसन्धानले अल्छे मानिसको उमेर लामो हुने देखाएको छ। जीवविकास अर्थात् इभोल्युसनले अब सर्भाइभल अफ द लेजिएस्टलाई समर्थन गर्ने अध्ययनबाट थाहा हुन आएको हो। अनुसन्धानकर्ताहरूले २ सय ९९ प्रजातिका आनीबानीको अध्ययन ग�
काठमाण्डौ / नेपाल र चीनबीच बहुचर्चित काठमाण्डौ&ndash;केरूङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चिनियाँ यातायात मन्त्रालयबीच सीमा पार रेल मार्ग सम्भाव्यत�
रेखा थापा भन्छिन् : ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी विश्वकै दूरदर्शी नेता’
काठमाण्डौ / नेपाली चलचित्रकी चर्चित अभिनेत्री रेखा थापाले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ विश्वकै दूरदर्शी नेता भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। शनिबार नेपालको दुई दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउनु भएका राष्ट्रपति सीलाई अभिनेत्री थापा
जानी राखौं यी राशिहरुबीचको प्रेम र बिवाह सफल हुँदैन
एजेन्सी / मानिस प्रेममा बाचेको हुन्छ। बिवाह मानव जीवनको महत्वपूर्ण पाटो हो। यो महत्वपूर्ण पाटो बिग्रियो भने जीवन नै तहसनहस हुन्छ। त्यसले पनि विवाह कस्तो व्यक्तिसँग गर्ने प्रेम कस्तो व्यक्तिसँग गर्ने ? तपाइले गरेको प्रेम विवा�
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको स्वागतका लागि तरकारी र फलफूलबाट स्वागतद्वार !
एजेन्सी / चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङलाई स्वागत गर्न भारतमा तरकारी र फलफूलबाट स्वागतद्वार बनाइएको छ।तामिलनाडुको बागवानीले सीको स्वागतका लागि तरकारी र फलफूलले बनेको विशेष प्रकारको गेट नै निर्माण गरेको हो। भारतीय समाचार सं�
प्रकाशित मितिः आश्विन २४, २०७६
यदि तपाई कसैसंग सम्बन्ध गास्न चाहनु हुन्छ भने याद राख्नुहोस यी कुराहरु
भनिन्छ मान्छेहरु प्रेममा अन्धो हुन्छन । भनेर सायद हो पनि किन भने आफुलाई मन परेको मान्छेको हरेक कुरा एकदम राम्रो लाग्छ चाहे प्रेमी होस् या प्रेमिका आफुलाई मन परेपछि अरुले आफ्नो मान्छेको बारेमा जति जे सुकै भने पनि कसैको कुरा सुन�
साँझपख झुक्किएर पनि नगर्नु यस्ता काम
काठमाण्डौ / धार्मिक मूल्य मान्यता अनुसार हामीले साँझको समय अर्थात् जब सूर्यास्त हुन्छ तब कुनै विशेष काम गर्नु हुँदैन। सन्ध्याकालमा यदि कुनै व्यक्तिले यस्ता काम गर्यो भने धन नोक्सानीको समस्या व्यहोर्नु पर्छ। साथै सो व्यक्ति �